सीताको अपहरण रावणले गरेकै हो ?
हाम्रो संस्कृतिमा सर्वाधिक चर्चित कथा नै रामकथा हो । यस संस्कृतिका अन्य धर्मावलम्बीहरूबीच पनि रामायण महाकाव्यको मूल कथा उत्तिकै श्रुत्य छ । वर्तमानमा रामकथाको मूल स्रोत वाल्मीकीय रामायण हो । वाल्मीकीय रामायणलाई नै मूल आधार मानेर अन्य रचनाकारहरूले पनि विभिन्न नाममा रामायण लेखेका छन् । रामायणको लेखनमा उद्देश्यगत भिन्नता पनि पाइन्छ । रामायण लेखिएको जमानामा प्रचलित अन्य आख्यानहरूका प्रवृत्ति वा पूर्वीय साहित्यको मान्यता सुखान्त रहेकाले रामायणलाई दुःखान्त नमानिएको र लवकुशकाण्ड पछि आएर थपिएको र लेखकहरूले आआप्mना तर्क, तथ्य र मिथकहरूलाई जोड्दै अनेक किसिम र कोणबाट विश्लेषण गरिएका रामकथा लेखे र अद्यपर्यन्त यो चलिरहेकै छ ।
मिथकहरू आप्mनै महŒव राख्ने हुन्छन् र पूर्णतया निरर्थकै हुन्छ भन्ने होइन । कुनै युगको निश्चित तर्कको प्रतिनिधित्व मिथकहरूले गरेका हुन्छन् । मिथक र रामकथाका केही प्रसङ्गबारे अहिले दशैंको समय भएकोले चर्चा गर्दा सान्दर्भिक होला भनेर यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ ।
अध्यात्ममा विश्वास गर्नेहरूले भन्छन्– सीताको अपहरण भएकै होइन ?
सीताको अपहरण गर्ने हैसियत, सामथ्र्य र शक्ति रावणमा थिएन ।
शिवलाई उठाएरै लैजान सक्ने सामथ्र्य भएका रावणचाहिं कसरी सीतालाई अपहरण गर्ने सामथ्र्य राख्दैनथे?
सबैलाई थाहा छ कि एक दिन बिहान घर लिपपोत गर्नेक्रममा सीताले शिवधनुषलाई बायाँ हातले उठाएर लिपपोत गरी फेरि पुरानै ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै राखेकी थिइन् । त्यो त्यही शिवधनुष हो, जसलाई विश्ववीरहरूले उठाउन त के हल्लाउनसमेत सकेनन् स्वयंवरमा । त्यहाँ रावणले पनि शिवधनुषलाई उठाउने प्रयास गरेका थिए । जब सीताले बायाँ हातले अति हलुँगो सामान्य वस्तुजस्तो गरी उठाएको शिवधनुषलाई रावणसमेतका विश्ववीरहरूले हल्लाउनसमेत सकेका थिएनन् भने सीता आपैंm परमवीर थिइन् भन्ने प्रमाणित हुँदैन ? अनि सीतालाई रावणले अपहरण गर्न सक्छ भन्ने सामथ्र्य रावणमा थियो भन्ने पत्याउने अर्को पनि तर्क छ ।
लामो समयसम्म सीतालाई लङ्काको अशोक वाटिका राखिएको थियो । रावण बारम्बार अनुनय विनय गर्थे । बारम्बार धम्की दिन लगाउँथे । अनेक त्रास देखाउँथे तर त्यसभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैनथे । एक दिन उनले सीतालाई डरले नै थर्कमान बनाइ आप्mनो कुरा मान्न लगाउन हातहतियारले सम्पन्न राक्षस दल लिई पुगे । त्यहाँ पुगेर रावणले सबै कला लगाए, थर्काउनसम्म थर्काए तर सीताले एउटा तृण अर्थात् घाँस उठाएर थर्काइन् कि सबै हतियारभन्दा यो ठूलो हो, मेरो आह्वानमा यसले भस्म गरिदिन्छ । सीताको तृणको डरले रावण केवल धम्की दिएरै फर्के । यहाँनेर हातहतियारले सुसज्जित रावणसेना किन त्यत्तिकै फर्के ?
तर्क त यस्तो पनि छ ।
सीताले दुई सन्तानलाई जन्म दिएपछि वनमैं राम्ररी शिक्षा दिन्छिन् । त्यतिबेलाको चलन अनुसार धनुर्विद्या र तर्कशास्त्रमा पारङ्गत भएपछि रामको अश्वमेध यज्ञको समयमा पितापुत्रको मिलन हुन्छ । दुई पुत्रको भरणपोषण भइसकेको हुन्छ । रामले पनि कामकाजका विभिन्न फाँटमा सीताको आवश्यकता रामले महसूस गरिरहेका हुन्छन् । तर पनि आप््mनो प्रतीज्ञाको कारणले सीतालाई भिœयाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । तर जब सीतालाई रामले आपूmसित अयोध्या फर्किनलाई आग्रह गर्दछन्, तब सीताचाहिं अस्वीकार गर्दछिन् । सीताको अस्वीकृतिपछि रामले अझ भावुक भएर घर फर्किन बल गरेपछि सीताले धरतीलाई फाट्न भन्छिन् । सीताको भनाइपछि धरती फाट्छिन्, जसमा सीता पस्छिन् ।
विश्ववीरहरूले उठाउन नसकेको त्यतिबेलाको सर्वाधिक प्रचलित हतियारमा गणना हुने परम्परागत शिवधनुषलाई बायाँ हातले उठाउन सक्नु, जसको हातमा एउटा तृणले हतियारसम्पन्न सेनालाई फर्काउन सक्नु र जसको आदेशले धरती नै फाट्न सक्नुले सीताको शक्तिलाई दर्शाउँछन् । बायाँ हातमा सामान्य शक्ति कति थियो ? उनले तृणलाई नै शक्तिशाली हतियारहरूभन्दा पनि शक्तिशाली बनाउन सक्छिन् भने उनमा जुनसुकै कुरालाई हतियारमा परिणत गर्ने क्षमता थियो । यसैगरी जसको आदेशमा धरती फाट्न सक्छ भने उनको बोलीमा कति शक्ति छ भन्ने देखाउँछ । यति धेरै शक्तिशाली सीतालाई रावणले अपहरण गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन ।
सीताको विषयमा यसो पनि भनिन्छ ।
जब विवाहपश्चात् सीता अयोध्या पुगिन्, तब केही दिनपछि परम्परा अनुसार सीताले एक दिन घरमा खाना पकाउनुपर्ने भयो । उत्तर भारत र दक्षिण नेपालका हिन्दू समुदायमा यो प्रथाकै रूपमा रहेको छ कि विवाहपश्चात् भित्रिएकी बुहारीले घरमा पहिलो दिन खाना पकाउँदा विशेष मानिन्छ । त्यो भोजन नै विशेष मानिन्छ । सीताले पनि त्यो गर्नैपर्ने थियो र एक दिन त्यो गर्नुपर्ने भयो । सीताले पहिलो दिन आपूmले पकाएको खाना खाने मान्छेको योग्यता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो बताइन् । आपूmले पकाएको खानाको पहिलो गाँस खाने मान्छेको लागि तोकिएको योग्यता भएको मानिस नभेटिंदासम्म खाना पकाउन उचित नहुने बताइन् । अयोध्या नरेश आपैंm विभिन्न शास्त्रका ज्ञाता थिए । तोकिएका सबै गुण केवल रावणमा मात्र भेटिन्थ्यो । रावणलाई खाना खाने निम्तो दिइयो र रावणले एक रात अयोध्यामा राजा दशरथको आतिथ्य ग्रहण गरेर सीताले पकाएको खानाको पहिलो गाँस खाए । त्यो पहिलो गाँस जुन ससुरोको नाता पर्नेले खानुपर्ने थियो, रावणले खाए । यस सन्दर्भले रावणचाहिं सीताको पितातुल्य थिए र उनले अपहरण गर्ने कुरै होइन । ससुरो र बुहारीको नाताले गर्दा सीतालाई रावणले अपहरण गर्ने हैसियत राख्दैन वा अपहरण गर्नै सक्दैन भन्ने तर्क गरिन्छ ।
उसो भए अपहरणमा पर्ने को त ?
आधुनिक भाषामा नाटक र परम्परागत भाषामा लीला ।
अहिले पनि नाटक गर्दा मानिस झुम्मिन्छन् । कसैले भनेर नबुभ्mने तथा नसुन्ने हुन्छ तर गरेर देखाएपछि भने बढी शिक्षाप्रद भएको मानिन्छ । सीताको अपहरण पनि केवल नाटक वा लीला मात्र हो । वास्तविक होइन ।
सीताको अपहरण हुने कुरा सीतालाई पहिले नै थाहा थियो । रामलाई पनि थाहा थियो । लक्ष्मणलाई थाहा थिएन । मायाको सीतालाई अपहरण गराइएको हो र वास्तविक सीता कुनै देवताकहाँ पठाइएको थियो । मायाको सीता वा सीताको प्रतिरूपलाई रावणले अपहरण गरेको देखाइएको छ । रावणमाथिको विजयपछि सीताको अग्निपरीक्षा भनेको अग्निको बहानामा वास्तविक सीतालाई रामको हातमा सुम्पन र मायाको सीतालाई आप्mनो ठाउँमा पठाउन अग्निपरीक्षाको आयोजन गरिएको थियो ।
यस्ता प्रसङ्गहरूले रामकथामा अनेक किसिमले विचार गर्नुपर्ने बनाउँछ । रामायण वा रामकथा कुन लेखकको पढ्ने र कुन उद्देश्यले पढ्ने भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।
ज्ञानको कदर हुने ठाउँ
ज्ञानको मुहान भनेर हाम्रो समाजमा दुई कुरालाई मान्न सकिन्छ– शिक्षक र पुस्तक ।
जसले जतिसुकै आलोचना गरेपनि वा जसले जेसुकै भनेपनि अहिलेसम्म शिक्षकले नै नेपालमा पढाउने काम गरेका छन् । जीवनमा शिक्षक बनेकाहरू पछि नेता वा अन्य पेशामा गएका पनि छन् । कतिपयले शिक्षक र शिक्षणलाई घृणा पनि गर्दछन् । शिक्षण पेशाप्रति कुण्ठाको भाव राख्नेहरू पनि छन् तर सबैले भने आप्mना सन्तानलाई शिक्षकको भरमा ज्ञानी बनोस् चाहन्छन् । शिक्षकले नै ज्ञानी बनाइदिऊन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविकरूपमैं राख्छन् । शिक्षकलाई कामै नलाग्ने, समाजलाई बिगार्ने, जिम्मेवारी वहन नगर्ने, शिक्षालाई सही दिशा नदिने आदि अनेक आरोप लगाउँछन् बुझेर वा नबुझेर तर म आप्mना छोराछोरीलाई शिक्षककहाँ नपठाएर म आपैंm ज्ञानी बनाउँछु भन्ने व्यावहारिक कार्य गर्ने आँट कसैले पनि गर्न सकेका छैनन् । शिक्षकले त राज्यले उपलब्ध गराएको स्रोतसाधनको आधारमा र पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पूरा गर्ने अभिप्रायले दैनिक कर्म गरेका हुन्छन् । शिक्षण पेशामा मात्र होइन अन्य पेशामा पनि सबल र दुर्बल पक्ष हुन्छन् । सक्षम र कमजोर मान्छे हुन्छन् । शिक्षकमा पनि यो लागू हुन्छ ।
अहिलेसम्मको परम्परा र मान्यता यही छ कि शिक्षकविना शिक्षाको कल्पना गर्न सकिंदैन ।
पुस्तक पनि ज्ञानको स्रोत हो । पुस्तकले झन् शिक्षकभन्दा निकै बढी कुरा सिकाउँछ तर पुस्तकलाई पढ्न सकिने आँखा र पुस्तकलाई बुभ्mन सक्ने विवेक पनि शिक्षकले मात्र दिन सक्छन् । यसै कारण पनि शिक्षकसित कसैको तुलना गर्नुहुँदैन भनेर पनि भन्दछन् ।
“शिक्षकको ज्ञान सीमित हुन्छ । पुस्तकको ज्ञान सीमित हुन्छ ।” वादविवाद र तर्कवितर्क गर्ने ठाउँ प्रशस्त हुन्छन् तर यदि शिक्षकको ज्ञान सीमित हुन्छ भन्ने तुलनामा पुस्तकको ज्ञान सीमित हुन्छ । पुस्तक आपैंmमा सिर्जनात्मक होइन तर पुस्तकलाई सिर्जनात्मक बनाउने काम शिक्षकले गर्न सक्छन् । गुरु निर्जीव भएपछि ज्ञान दिंदैनन् तर पुस्तक सजीव भएर ज्ञान दिन सक्दैन अर्थात् निर्जीव पुस्तकले ज्ञान दिन्छ । हो, निर्जीव पुस्तकभित्र सजीव ज्ञान समेटिएको हुन्छ ।
एउटा गज्जबको तर्क मेरो मनको खेतमा उम्रेको छ । गुरुको सही आदर पुस्तकले नै गर्दछ । पुस्तकको सही आदर शिक्षकले मात्र गर्न सक्दछन् । यो विरोधाभाष तर्क होइन । सतही विश्लेषण पनि होइन । यस अर्थमा शिक्षक र पुस्तकको सम्बन्ध खेत र बालीजस्तो घनिष्ट हुन्छ । हो, प्रयोगशालामा पनि बाली उमार्न सकिन्छ तर सर्वसाधारणको पेट भर्न खेतकै भर पर्नुपर्छ । ज्ञानको असली केन्द्र शिक्षालय र शिक्षालयको शिक्षा दिने आत्मा भन्नु नै शिक्षक हुन् ।
शिक्षालयमा शिक्षार्थी शिक्षककै कारण पुग्दछन् । अभिभावकको विश्वास भौतिक संरचनामा भन्दा बढी शिक्षकमाथि हुन्छ । कुनै शिक्षालयको प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ्नु भनेकै सक्षम शिक्षकको सम्मान हुनु पनि हो तर आंशिकरूपमा के अर्थ पनि लगाइन्छ भने शिक्षकको प्रतिष्ठा शिक्षालयले पनि बढाउँछ । यसलाई ठाउँविनाको कालो र कुठाउँविनाको गाजल (कुठाउँमा लाग्यो भने कालो र ठाउँमा लाग्यो भने गाजल) भन्ने उखानले चरितार्थ गरेजस्तो देखिन्छ ।
अलिकति गहिरिएर विचार गर्ने हो भने पुस्तक र शिक्षक ज्ञानका दुवै स्रोतको सम्मान त्यहीं हुन्छ, जहाँ ज्ञानको सम्मान हुन्छ । ज्ञानको सम्मान कहाँ हुन्छ त ?
ज्ञानको सम्मान हुने ठाउँको खोजी गर्ने हो भने ज्ञानको सम्मान हाम्रो समाजको वर्तमानले गरेको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्नुपर्छ । ज्ञानको सम्मान कत्तिको छ भन्ने उत्तर खोज्न आप्mनै घर, छिमेक र गाउँ वा शहरलाई मनमनै गमेर हेरौं । कोही पढेलेखेका मानिस पनि कुनै कृति पढ्छन् त ? कुनै पुस्तकको अध्ययन, विश्लेषण वा पुस्तक–संवादमा केन्द्रित हुने टोला वा ठाउँ छ कि छैन ?
यसको अन्तर्यमा छिट्टै अलोकप्रिय वा छिट्टै लोकप्रिय हुने तŒव लुकेको छ । शिक्षालयहरूमा तालीमप्राप्त र लाइसेन्सप्राप्त हुनुपर्ने तर शिक्षालयको व्यवस्थापनको प्रमुख भने औंठा छाप नै हुने, कुनै लाइसेन्स नचाहिने, कुनै बाध्यात्मक योग्यता नहुँदा शिक्षालयमैं शिक्षाको कदर नभएको देखिन्छ । यसले शिक्षाको शासक कालो अक्षर भैंसी बराबर हुँदा शिक्षकको वा शिक्षाको वा ज्ञानको सम्मान हुन्छ त ?
विश्वका अति सभ्य, अति शिक्षित र ज्ञानको दृष्टिले निकै विकास गरेका देश वा समाजको अध्ययन गर्ने हो भने वास्तवमा ज्ञान र ज्ञानीलाई सम्मान गरिएको पाइन्छ । ज्ञान दिने मानिस आपैंmमा सम्मानयोग्य हुन्छ र हुनुपर्छ । अझ राज्यले नै बालबालिकालाई ज्ञान दिने जिम्मेवारी तोकेपछि राज्य, राज्यका निकाय तथा अन्य पक्षले उच्च सम्मान दिनुपर्ने हो । ज्ञान दिनेलाई अवहेलना, अपमान, हेला, तिरस्कार हुने माटोमा ज्ञानको बिरुवाको चिल्लो पात होला त ? ज्ञानीमाथि अज्ञानीको शासन गर्ने बाटोमा हिंड्नेले ज्ञानको सही गन्तव्य पाउन सक्ला कि नसक्ला ? तर यहाँ चाहिं एउटा ज्ञानीले ज्ञानको उपयोग सही तरीकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्नुपर्छ भन्ने विचार पु¥याउनुपर्ने आग्रह पनि छ । कसैले दुराग्रह राखे पनि ज्ञानको ज्योति बाल्नेले उसको मस्तिष्कमा पनि ज्योति छर्ने काम गर्नुपर्छ । हेला र दुराग्रहको सामना सबैभन्दा बढी ज्ञानले नै गर्न सक्दछ । अज्ञान यदि ज्ञानमाथि हावी हुन्छ भने समाजमा चेतनाको गति तीव्र हुन सक्दैन तर ज्ञानको दीपक निभ्छ भन्ने कल्पनै नगरे पनि हुन्छ । बरु दिउँसोको उज्यालो घाम भनेको उज्यालो आपैंmले अँध्यारोलाई हटाउन कुनाकाप्चालाई पनि खोजेको हो भने रातिको टुकीको उज्यालोले अँध्यारोबीच आप्mनो पैmलावटको प्रदर्शन गरेर आप्mनो महŒव साबित गरेको हो । उज्यालोमा पनि उज्यालोको महŒव हुन्छ भने अँध्यारोमा त झन् उज्यालोको महŒव बढी हुन्छ ।
उज्यालोको मुख कहिल्यै पनि अँध्यारो हुन्न । उज्यालोको अगाडि अँध्यारोले जहिलेपनि आप्mनो मुख लुकाउनुपर्ने हुन्छ । उज्यालोको महŒव नबुभ्mने होइन तर हृदयभरि र मस्तिष्कभरि अँध्यारो लिएर आप्mनो अनुहारअगाडि उज्यालो बाल्ने काम न त शिक्षकबाट सम्भव छ र न त कुनै पुस्तकले नै गर्न सक्दछ।
अहिले बिहानको दश बज्न लागेको छ । बिहानको चिया खाएका छौं तर मेरो बानी कस्तो छ भने बिहानै केही खानुपर्ने । बिहान उडिसामा पस्नासाथ चिया खाएका हौं । म चियासित बेग्लै खालको पाउरोटीजस्तो पनि अलिकति लिएको छु । नयाँ ठाउँमा अलिकति नयाँ परिकार खान मन पराउँछु । राम्रो लागोस् कि नलागोस्, त्यो स्वादको काम हो तर आपूmलाई पनि स्थानीय कुरामा अलिक फरक स्वाद लाग्दछ ।
यो चरम्पा हो । चरम्पा भन्ने ठाउँ त्यति ठूलो शहर होइन तर सानो बजार पनि होइन । सडकबाट हुइँकिदा भने दश मिनेटमैं नाघ्न सकिन्छ तर हामीलाई केही काम भने नगरी नहुने भएको छ । भद्रकमा तरकारी किन्नु छ र चुल्हो भएको सानो ग्याँस सिलिन्डर पनि बनाउनुछ । नबनाउँदा होटलमा खाना खानुपर्छ । होटलको खाना महँगो हुन्छ । त्यति स्वादिलो पनि लाग्दैन । आफैंले बनाएको र आप्mनो स्वाद अनुसार तरकारी पकाएर खाँदा सधैFं पिकनिककै आनन्द आउँछ ।
कालोपत्रे सडकमा नाङ्गो खुट्टा हिंड्दा निकै पोलेको छ, तर उत्सुकता छ बजार हेर्ने । रहर छ, मानिससित कुराकानी गर्ने । भोक पनि लागेको छ । केही नखाई हुँदैन । मौका पाउनासाथ पेटमा केही हुलिहाल्नुपर्छ, हैन भने सधैंजस्तो खाना पकाएर खाँदा दिउँसोको एक बजिहाल्छ ।
उडिसाका तीस जिल्लामध्ये भद्रक पनि एक हो । भद्रक त्यति ठूलो जिल्ला होइन तर यो ऐतिहासिक जिल्ला भने अवश्य हो । जहाँसम्म मलाई सम्झना छ, चरम्पा र भद्रक दुवै ठाउँको नाम पहिलोचोटि पढ्दैछु बोर्डमा । बोर्डहरू पनि उडिया भाषामा लेखिएका छन् । आप्mनै लिपि छ उडियाको । आप्mनै शैली छ उडियाको । तर अंग्रेजी भाषाको पर्याप्त प्रयोग लेखाइमा भएको हुनाले ठाउँहरूको नाउँ बुझ्न त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन । त्यसैपनि हामीले मोबाइल एप प्रयोग गरेर यात्रा गर्दैछौं । सामान्यतया कसैलाई कुनै ठाउँबारे सोध्ने जरुरत नै छैन । बाटो पनि देखाउने, मोड वा नयाँ सडक आउनासाथ पहिले नै जानकारी गराउने र कति गतिमा कतातिर हिंडिरहेका छौं तथा गन्तव्य कति टाढा छ भन्ने सबै कुरा मोबाइलमैं आउँछ ।
तरकारी बजारमा स्कारपिओ पस्छ । पस्न दिन्छन् र एउटा पसलको छेउमैं लगाउँदा पनि केही बोल्दैनन् । केही बोल्दैनन् भन्दा पनि उनको अनुहारमा कुनै विपरीत भाव देखिंदैन । ग्याँस सिलिन्डर बनाउने ठाउँ पनि पहिले नै देखेका छन् प्रेम सर र देव सरले गाडीबाट ओर्लेर । मनु गिरी चालक हुन्, उनी छतमा चढेर सिलिन्डर झिक्छन् । मेरो काम हुन्छ चालकलाई खाजा ख्वाउने । मैले खोजेको पनि यही हो कि चालकलाई खाजा खुवाउँ र सँगै बसेर आपूm पनि खाउँ । तर बिजोग मिल्छ, संयोग मिल्दैन किनभने जस्तो खाजा गिरीले मन
पराउँछन्, त्यो आपूmलाई मनै पर्दैन । जाबो पुरी, तरकारी र मिठाइ खानुभन्दा त भोकै बस्नु जाती । टन्न खाजा खान्छन् र पैसा सोध्छु त तीस रुपये । हैट कति सस्तो ? त्यति खाजा र मिठाइको त हाम्रो वीरगंजमा डेढ सय र जनकपुरमा दुई सय रुपैयाँभन्दा कम पर्दैन हो १
स्कारपियोले देखाए अनुसार गरुडाभन्दा करीब एक हजार दुई सय किलोमिटर टाढा छौं । हुनत धेरै घुमाउरो बाटो हिंड्नुपरेको छ । हल्लिंदै, रल्लिंदै र बरालिंदै त होइन, तर घुम्दैफिर्दै नयाँ ठाउँहरु हेर्दै जाने भएकोले बढी दूरी लागेको हो । स्कारपियोको चक्का घुमेपछि दूरी बढ्नु स्वाभाविक हो ।
हामी वास्तवमा अहिलेको गन्तव्य बनाएका छौं जगन्नाथपुरी । राति वास बसेका थियौं बहरागोडा भन्ने ठाउँमा जुन झारखण्डकै सीमावर्ती हो ।
आज सोमवार हो । साउन ६ गते २०७६ तदनुसार २२ जुलाई २०१९ । गत शुक्रवार हामी घरबाट निस्केका थियौं । आज राति हाम्रो वास जगन्नाथपुरीमा हुन्छ । हामीलाई आज कुनै हतार छैन किनभने हामीले बुझेका छौं, आरामले हामी जगन्नाथपुरी पुग्छौं । अब धेरै टाढा छैन । यसैले तरकारी किन्नु पनि स्वाभाविक हो । झन् होटलमा चालकले खाजा खाँदा नै देखेको छु, हाम्रोभन्दा निक्कै भिन्नता देखिन्छ यहाँ । चिल्लो अलि बढी नै, जेमा पनि । आपूmलाई चिल्लो, पिरो र नुनिलो चाहिं हुनुहुँदैन । सकेसम्म सादा खाना मलाई मन पर्छ ।
अF, खाजा नखाएपछि मैले आप्mनो लागि त केही किन्नुप¥यो । अघि एक ठाउँमा टोल टेक्स तिर्दा किनेको जामुन लगभग स्वादहीन थियो । सबैले नखाइकन फाले । मैले बरु अलिकति बढी खाएँ । यसपालि जामुन त्यति खान पाइएन । जामुनको सिजन गइसकेको छ तर खान पाइएको छ भने अलिकति खाउँ भनेर खाएको हुँ । भित्री मनमा यो पनि थियो कि जामुन सुगर रोगबाट बचाउने सबैभन्दा सस्तो औषधि हो, यो सुनेको छु । कुनै फल किनूँ भने त्यस्तै नमीठो पर्ने डर । एउटा ठेलामा अम्बा बेचेको देख्छु । खाली पेटमा अम्बालाई पनि स्वस्थकर मानिन्छ भन्ने सुनेकोले सजिलोको लागि त्यहीं किन्न अगाडि बढ्छु ।
एक किलोको चालीस रुपैयाँ त महँगै हो । अम्बा पनि सामान्य नै लाग्छ हामीकहाँको जस्तै । बेच्ने चाहिं नवयुवक हुन् । हेर्दा विपन्न समुदायकै । उति पढेलेखेजस्तो लाग्दैनन् । पूmर्ति भने गज्जबको छ । न धेरै पाकेको र न धेरैै काँचो अम्बा छान्न उनले पनि सहयोग गर्दछन् हामीले खोजेजस्तै । चालकसित म बज्जिकामा कुराकानी गर्दा उनी बडो उत्सुकताका साथ सुन्छन् र मुस्कुराउँछन् । अनि मुखर हुन्छन् – हिन्दी मलाई पनि आउँछ । बिहारसम्म पुगेको छु । हामी बिहारी होइन नेपाली हौंभन्दा अझ उत्सुकता बढ्छ उनमा ।
उडियामा अम्बालाई के भन्छन् होला ? मनमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । म सोध्छु कि यसको नाम के हो ? उत्तर आउँछ – पेंडा । फेरिफेरि सोध्दा उत्तर त्यहीं आउँछ । हिन्दीमा के भन्छन् त उसो भए ? अलि शङ्का लागेर सोध्छु । उनी फोनमा एकजनासित सोधेर बताउँछन् अमरुद । अनि रूखमा फल्ने पेंडाको स्वाद आपूmलाई अलि बढेजस्तो लाग्छ ।
जिलेबीको रूख धेरै देखेको छु । अहिले पनि कतैकतै पाइन्छ तर अब जिलेबीभन्दा बढी रूख त उडिया भाषाको पेंडाको हुने भयो । अरू कुनै शब्द सुन्ने वा सिक्ने मस्तिष्कमा ठाउँ नै भएन । मनोरञ्जनको हावाले बेलुन भरिएजस्तै यहीं एउटा शब्दले अहिलेलाई पुगेको छ । हामीले भन्ने पेंडालाई हामीले पेंडा भनेपछि पनि उनीहरू बुझ्दछन् ।
नेपाली भाषामा अम्बा भनिने फलको लागि विभिन्न भाषामा लताम, अमधुर, अमरुद र ग्वाभा भनेर व्यवहार गरेको पाएँ ।
चरम्पाबाट प्रस्थान हुन गाडीमा बसेपछि हामी सबैको निष्कर्ष रह्यो– मानिसहरू अत्यन्तै इमानदार । अपरिचितलाई देखेर दुई पैसा बढी लिइहालूँ भन्ने भाव नै नभएको । ठग्ने प्रवृत्ति नहुनेमात्र होइन कि सम्मान पनि प्रदर्शन गर्ने । व्यवहारबाट सम्मान गरेको र नगरेको त बुझ्न सकिन्छ नि १ बिहान चिया खाँदादेखि अहिले चरम्पाको बजारमा सानातिना सामान किन्दा, सिलिन्डर बनाउँदा, खाजा खाँदा, केही सोधपुछ गर्दा तथा गाडी पार्किङ गर्दा उडिया नागरिकसितको व्यवहारले उनीहरूप्रति निर्माण भएको पहिलो
धारणा हो, यो । चरम्पाबाट अब अगाडि बढ्छौं जगन्नाथपुरीतिर, जुन हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि प्रमुख मानिने चार धाममध्ये एक हो ।